ဆူးထွင်းအပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဆူးထွင်းအပ်
Posted by kai on Jun 7, 2011 in Community & Society, Think Tank | 13 comments
ရွာထဲက ဆူးကတော့ နှုတ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး၊ အလိုက်ကမ်းဆိုးလည်းမသိ၊ စွာလည်းစွာပါတယ်…
ဆူးရွာထဲမ၀င်သေးဘူး … ဖုန်းဆက်ပြီး လှမ်းခေါ်လိုက်ဦးမယ်… ကိုကြောင်ကြီး အတင်းတုပ်နေတယ်လို့လဲ ပိုပိုသာသာလေးပြောလိုက်ဦးမယ် …
မဟုတ်ရင် မခံ စိတ်ဓါတ် မျိုး လို့ထင်ပါတယ် ကိုကြောက်ရေ ဂျ……၊
အင်း ကောင်းလိုက်တဲ့စာလေး ပါ..
လူတိုင်းဆူးနေကြပါတယ်.. ဒါပေမယ့် နှုတ်တဲ့နည်းမသိကြတော့ ထပ်ထပ်ဆူးရင်း အနာတွေ ထပ်နေကြတာပေါ့..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆူးထွင်းအပ်ကလေးကတော့ အသုံးဝင်ပါတယ်ဗျာ..
ကျွန်မက ငယ်ငယ်လေးကထဲက အရိုက်ခံရမှာ အလွန်ကြောက်ပါတယ် … မိဘတွေကလည်း လက်နဲ့တောင် မရွယ်ခဲ့ဘူးပါ … ၄ တန်းနှစ်မှာ အလွန်အရိုက်ကြမ်းတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တော့ စာမမှားအောင် ကြိုးစားပြီး အရိုက်လွတ်အောင် ရှောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် တစ်နေ့မှာတော့ ညနေ ကျောင်းဆင်းခါနီး နာရီဝက်လောက်အလိုမှာ ကျွန်မနားထဲမှာ ကျောင်းဆင်းခေါင်းလောင်းသံကို ကြားမိပါတယ် … လွယ်အိပ်ထဲလဲ စာအုပ်တွေ ထည့်ထားပြီးသားအချိန်ဆိုတော့ ကျောင်းလွှတ်တယ်လို့ ထင်ပြီး အခန်းအပြင်ကို တစ်ယောက်ထဲ ထွက်လိုက်မိပါတယ် … ဆရာက အော်ပြီးပြန်ခေါ်လိုက်တယ် …. ကျောင်းမလွှတ်သေးပဲ ဘာလို့ပြန်ရတာလဲလို့ ဒေါသတကြီးမေးပါတယ် … ကျွန်မက သူ့ကြိမ်လုံးကိုကြောက်ပြီး ဘာမှပြန်မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး … လက်ဝါးဖြန့်ဆိုပြီး ကြိမ်လုံးနဲ့ တစ်ချက် အားနဲ့ရိုက်လိုက်တာ ခံလိုက်ရတယ် …. ကျွန်မမှာ ဘာအပြစ်မှမရှိပဲ အရိုက်ခံရတဲ့ အဲဒီနေ့က အဖြစ်အပျက်ကို အခုထိ မမေ့နိုင်ခဲ့သလို ဆရာ့ကိုလေးစားခဲ့တဲ့စိတ်လဲ အဲဒီနေ့ကထဲကပျောက်ခဲ့ပါတယ် … နောက်တစ်နှစ်မှာ ဆရာဆုံးပါးသွားလို့ အဲဒီဆူးတစ်ချောင်းကို အခုထိ နှုတ်လို့မရနိုင်သေးပါဘူး …
တချို့ကလည်း မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့ ဆူးရှိနေတာလေးကို မသိစိတ်ကကျေနပ်နေတော့ နုတ်ဘို့မကြိုးစားကျဘူး……….
ကျနော့မှာလဲတချိန်က ဆူးလေးတစ်ချောင်းစိုက်ဝင်ခဲ့ဘူးပါတယ် …………………..။
ဒါပေမဲ့ အသဲတနေရာမှာဆိုတော့ မထွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး …….။
ရင်ထဲမှာ ဆူး နေတဲ့ ဆူးလေး မဟုတ်ဘူး ဆူးကြီးတွေမှ အများကြီး…
ဦးဖတ်တီး ပြောသလိုပဲ ပြည်တယ်ပြီး ရိရွဲ နေတာပဲ.. ပေဖြစ်တဲ့ အချိန် ထု ခံရတာ မဆန်းပါဘူး။
ကျောင်းမှာလည်း ကျောင်းမှာ မိုလို့.. အိမ်မှာလည်း အိမ်မှာ မိုလို့.. နောက်ဆုံးတော့ ဗီဇ အရိုက်ချိုးခံရလို့ နလန်တောင် မထူနိုင်တော့ဘူး။
တခါတခါ ထပြီး ဇာတိက ပြချင်ပေမဲ့.. စွဲမြဲနေတဲ့ ဆူးကြီး ဆူးလေးများ ပြည်တည်နာတွေက အရမ်းကိုက်တတ်လို့ ကျုံးထ လိုက်ပေမဲ့ အရှေ့တိုးဖို့ အားသိပ်မရှိဘူး။
ရွာထဲက ဆူး မဟုတ်တဲ့ဆူးတွေအကြောင်းပြောရင် အများကြီးပ
ဒါပေမယ့်လဲ ဆူးတွေက အသားမာတက်နေတဲ့ လူကို ထပ်မစူးနိုင်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့
ကောင်းလိုက်တဲ့ post လေးပါဘဲ။
ဆရာမ ခမျာမှာလဲ သူ့ကိုယ်သူ မှားမှန်းသိပြီး နောင်တတွေနဲ့ နေရရှာမယ်ဆိုတာ သိသာစေပါတယ်။
ကလေးကို ပါးစပ်က ဖွင့်ပြီးမတောင်းပန်ပေမယ့် လက်ကိုင်ပုဝါဖြူလေးပေးပြီးချော့ရှာတယ်ဆိုကတည်းက ဒီဆရာမ စိတ်ဓါတ် တော်တော် ချီးကျူးဘို့ကောင်းနေပါပြီ။
ဒီလိုဆူးလေးတွေ ထွင်ပစ်တတ်ဖို့ အကြံပေးချက်လေးကိုလည်း ကျေးဇူးပါဘဲ။
ကိုယ်မမှားဘဲ ဆူခံရိုက်ခံရလို့ ရတဲ့ ဆူးလေးတွေရှိပေမယ့် အချိန်ဆိုတာက ကုစားပေးတော့လည်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အနာလောက်မနာတော့ပါဘူး။
အဲလိုပဲလူတိုင်းရဲ.ဘ၀မှာတော့ဆူးလေးတွေရော ဆူးကြီးတွေရောကိုယ်စီရှိကြမှာမလွဲပါဝူး အဲစာထဲမှာပဲသူ၇င်ထဲကဆူးတွေဘယ်လိုပျောက်အောင်လုပ်သလဲဆိုတာဖတ်လိုက်ရတော့သူအယူအဆကို
လက်ခံမိပါတယ် စာကောင်းပေကောင်းတွေများများဖတ်တာပါတဲ့..မှန်ပါ၏ စာကောင်းပေကောင်းများကိုဖတ်
ရှုခြင်းအားဖြင့်မိမိ၏ညစ်ညူးနေသောစိတ်များ ပင်ပန်းနေသောစိတ်များ လွဲမှားနေသောခဏပျောက်ကွယ်နေ
ကောင်းလိုက်တာ။ အဆုံးသတ်လေး တော်တော်ကောင်းတယ်။